eHimalayatimes | स्वास्थ्य र शैली | ४५ वर्ष नाघ्नु भो ? प्रोस्टेट जाँच गराउनुस्
22nd June | 2018 | Friday | 5:53:48 AM
४५ वर्ष नाघ्नु भो ? प्रोस्टेट जाँच गराउनुस्
पार्वती थापामगर POSTED ON : Thursday, 07 September, 2017 (4:04:36 PM)
काठमाडौं । सानेपाका ६६ वर्षीय कुमार श्रेष्ठको ५१ वर्षको उमेरमा पिसाबमा रगत देखा प¥यो । वीर अस्पताल गएर जाँच गराउँदा उनको ‘प्रोस्टेट’ मा ट्युमर पलाएको देखियो । उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । यो १५ वर्षअघिको कुरा हो ।
कुमार अहिले पनि आफूले प्रोस्टेटको जाँच नियमित गराइरहेको बताउँछन् । ‘प्रोस्टेट’ को क्यान्सर हुने सम्भावना बढी देखिएकाले उनले चिकित्सको सल्लाहअनुसार तुरुन्तै अप्रेशन गराए । हालसम्म करिब पाँच लाख रुपियाँ खर्च भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रोस्टेट’मा पलाएको ट्युमर अप्रेशन गरेर फालेपछि उनले केही वर्ष हरेक तीन महिनामा किमो थेरापी, रेडियो थेरापीलगायतबाट नियमित उपचार गराए ।
रगत देखापर्नु भन्दा अघि उनलाई पिसाब रोकिँदै आउथ्यो र निखारिँदैन थियो । ‘पिसाब रोकिएका कारण ढाड पनि दुख्थ्यो,’ उनले भने ‘सामान्य होला भनेर त्यति ध्यान दिइनँ ।’ उनले घरमा कुरा पनि गरेनन् । त्यसको एक–दुई महिनामा रगत देखा परेपछि उनलाई डर लाग्यो । यसपछि उनी वीर अस्पताल पुगे ।
अहिले उनलाई निकै सुधार भएको छ । वर्षमा एक पटक ‘फलोअप’ मा जान्छन् ।
दोलखाका ६० वर्षीय राम खड्कालाई पनि प्रोस्टेटको क्यान्सरको लक्षण देखापरेको छ । उनको पनि निकै ढिलो रोग पत्ता लाग्यो । उनले जिल्लाका धेरै हेल्थ पोस्टहरूमा धाए । रोग पत्ता नलागेपछि वीर अस्पताल आइपुगे । उनी बुधबार ललितपुरको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टरमा भेटिए । उनी वीर अस्पतालबाट रिफर भएका हुन् ।
‘डेढ वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न हेल्थपोष्ट तथा स्वास्थ्य चौकीमा धाउँदा धाउँदै थाकेर राजधानी आएँ । पिसाब सानो आउने र रोकिने अनि ढाडको दुखाइ बढ्दै जाने भएपछि उनी छोराहरूको साहारामा वीर अस्पताल आइपुगे । अस्पतालले ‘प्रोस्टेट’ मा मासु पलाएको पत्ता लगाएर नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टरमा पठाइदियो । चिकित्सकले उनलाई रोग निको हुने बताएका छन् ।
उदयपुर बसाहाका ७९ वर्षीय जितबहादुर राईलाई पनि आठ महिनाअघि पिसाबमा रगत देखाप¥यो । उनका छोराछोरीले केही वर्षयता वर्षमा एक पटक बुबाको स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेका थिए । पछिल्लो पटक तीन वर्ष भएको थियो नजँचाएको । गत फागुनमा जाँच गराउँदा प्रोस्टेटमा क्यान्सर देखा प¥यो ।
डेढ महिनाअघि जितबहादुरको पनि नेपाल क्यान्सर अस्पतालमै अप्रेशन भएको छ । चिकित्सकहरूले अप्रेशन सफल भयो भनेका छन् । उपचारमा चार लाख रुपियाँ खर्च भयो ।
यी बिरामीहरू बुधबार नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा आयोजित ‘प्रोस्टेट, मूत्र थैली र मिर्गौला क्यान्सर लागेर बाँच्न सफल भएका व्यक्तिहरूसँग’ को अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भेटिएका हुन् ।
युरो अंकोलोजिष्ट रोविन जोसीका अनुसार ‘प्रोस्टेट’ क्यान्सर निकै खतरनाक रोग हो । नियमित जाँच नगरे रोग पत्ता लाग्न नपाई ज्यान जान सक्छ । प्रोस्टेट क्यान्सरमा फिसाब फेर्न गाह्रो हुने, रोकिई रोकिई बिस्तारै पिसाब आउने र बारम्बार पिसाब आइरहने ढाड दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
समान्यतयाः ४५ वर्षको उमेर पार गरेका पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सर देखा पर्नसक्ने जोसी बताउँछन् । प्रोस्टेट क्यान्सर लागेपछि राति बढी पिसाब लाग्छ ।
रिसर्ज सेन्टरका ‘मेडिकल डाइरेक्टर’ डा. विजेशराज घिमिरेले प्रोस्टेट क्यान्सर रोग बढ्दै गएकाले न्युनीकरणका कदम चाल्नुपर्ने बताए । जिल्ला अस्पतालहरूमा रेडियोलोजी सेवा नहुने भएकाले यसमा समेत सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पैसा भएका व्यक्तिहरूले विदेश गएर उपचार गर्ने तर गरिबहरूले दुःख पाउने गरेको उनले बताए ।
डा. घिमिरेका अनुसार ७० वर्षमाथि उमेरका व्यक्तिलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको बढी खतरा हुन्छ । उमेर जति वृद्ध हुँदै गयो खतरा उति बढ्दै जान्छ । ४५ वर्ष उमेर नाघेका पुरुषमा प्रोस्टेटको नियमित परीक्षण गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।